How many Zimbabweans are in South Africa? - Across the Sahara
How many Zimbabweans are in the UK?
Why Zimbabweans migrate to South Africa?
How many Zimbabweans are in USA?
South Africa is estimated to have the bulk of Zimbabwe’s diaspora community, with an estimated two million to three million Zimbabwean nationals living in that country. Second to South Africa as a destination of permanent settlement for Zimbabweans is the UK.